> Resource > Video > Splice Video Editor u PC: Si fudud Edit Videos on PC
Splice Video Editor waa codsi video free tafatirka shaqeeya on iPhone 4, iPhone 3GS, iPod Touch, iyo iPad. Sidaa daraadeed, aad si fudud ku dari kartaa koob ama kala guurka, dalagga, tirtirto, resize, bedesho qodobada bilowga iyo dhamaadka, ama xataa qabsato xawaaraha aad video clips. Waa si la yaab leh u fududahay in la isticmaalo, balse nasiib in aysan la iman version PC ah, ama qorshe kasta waxaa loogu talagalay. Si kastaba ha ahaatee, waxaad had iyo jeer ka heli kartaa badal wanaagsan. Halkan waxaan ku tag.
Wondershare Video Editor ( Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) ) waa u fududahay in la isticmaalo weli heer sare casri video tafatirka iyo nidaamka audio / video saamaynta. Waxaa lagu talinayaa in ay dad badan oo awood leh saddexaad xisbiyada, oo ay horey ugu guuleystay wanaagsan comments ka tan oo isticmaala. Sida Splice ah Video Editor u PC, waxa ay taageertaa kala duwan ee videos, Cajalado, iyo sawiro ( ka eeg Creech casriga ah ) iyo waxay bixisaa dhammaan qalabka tafatirka guud sida goo, isku beddesha, Split, Dalag, isku darsamaan, iwm Dadka isticmaala sare, waxaa sidoo kale awood u aad ku darto horyaal oo aamusnaan ah la saamaynta text dhisay-in, dalban kala guurka, Intro / credit, bedesho xawaaraha ciyaartoyda, qabsadaan garoonka audio, iyo in ka badan. Download Free version tijaabo ah Splice Video editor u PC:
Splice Video Editor u PC la interface ogaado
Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) waa u fududahay ah si ay u isticmaalaan video software tafatirka u PC Timid interface ogaado. Waxaa loogu talagalay macaan fudud software video tafatirka u isticmaala guriga ama isticmaala aan joogtada ahayn. Waxay u baahan tahay maalgelinta ugu yaraan markii odaygii ku salaysan wax soo saarka oo tayo leh. Riix iyo jiididda iyo dhibic. Jadwalka ku salaysan hawlaha video oo dhammu waxay yimaadeen sida ugu fudud ee ay tahay.
Easy Video ayeey - Dalagyada, isku beddesha, goo, Splice, guurka, Intro / Credit oo ka badan
Iyada oo ay taasi splice video editor u PC, wax walba waa uu watay. Waxaad si fudud u soo jiidi kartaa jeedi videos, musics, ama sawiro si degdeg ah wax ka bedel. Haddii aad rabto in aad si ay u qoraan Sheeko in videos ah, riix "Record" button oo taga, waayo.
Si aad ku dari kala guurka, jiididda iyo hoos u kala guurka ah si ay u video / sawirka, ama xaq u riix si "waxay khuseeyaan dhammaan".
Si aad ku dari horyaalka, jiididda iyo hoos u template horyaalka inay booska aad rabto in ay kor u muujiyaan oo astaysto ah.
Si aad ka dooran karto 50 + saamaynta video, waxa ay doortaan iyo codsan in aad sawiro / videos goobtii.
Plus, wax kasta oo aad rabto in aad, kaliya aad u hesho qalab saxda ah ee aad gacanta, oo ay ku jirto jaritaanka, lana siii, qoqobada, tafatir audio (track video, voiceover iyo music soo jeeda), iyo qaar kaloo badan.
Splice Video Editor u PC, Unlimited Video Sharing
Wondershare Video Editor waddada u xaarayaa in qoyska iyo saaxiibada wadaagaan videos goobtii, wax kasta waa on YouTube, computer, Qalabka telefoonada gacanta ama TV, waxaad dooran doonaa jidka aad. Waxaad si toos ah video in YouTube, iyo sidoo kale fariin u diraya optional in Facebook iyo Twitter gali kartaa.
Horena profiles ka mid yihiin in ay wax soo saarka videos for ciyaaro on Qalabka telefoonada gacanta sida iPhone, iPad, iPod, PSP, Madaxweyne Siilaanyo, Zune, iwm A-urursiga ee DVD qalab gubashadii kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan DVD tayo sare leh u daawanayay TV-ga ama DVD gurigaaga ciyaaryahan meel walba.